Njani ukufumana ikopi a wokuqhawula umtshato Ukuze, Isiqinisekiso wokuqhawula umtshato okanye enye inkundla uxwebhu - Nesebe le-Lamagqwetha Jikelele
Njani ukufumana ikopi a wokuqhawula umtshato Ukuze, Isiqinisekiso wokuqhawula umtshato okanye enye inkundla uxwebhu — Nesebe le-Lamagqwetha Jikelele
Ukuze ufumane ikopi nayiphi na kwezi amaxwebhu, kufuneka isicelo kubo ukusuka kwinkundla-ofisi apho ityala lwaqalwa. Ukuba ufaka ayikwazi kuzimasa kwi-umntu, nibe buza ummeli abekho ikhutshwe egameni lakho okanye nibe ukubhala inkundla-ofisi. Unokuba nomdla umnxeba inkundla-ofisi kwangaphambili ukuba buza malunga nayiphi na amanyathelo ukuba ziyimfuneko ukuze ufumane uxwebhu.
ngu ibe igcwalisiwe ukuze ufumane Isiqinisekiso wokuqhawula umtshato. Iikopi umntwana inkxaso ukuze ezifumanekayo phezu isicelo kwi-inkundla-ofisi apho inkundla ifayile ukhoyo. Qaphela kodwa ukuba i-CRDP unako kuphela sikunika kwakho umtshato registry inani kwaye akanalo iikopi wokuqhawula umtshato iziqinisekiso.
Uxwebhu kuba divorces okokuba baba wanika ezise phambi kusenokuba wazuza ukususela Zokugcina ye Eontario
Oovimba abasebenzi baya kufuna nyaka wokuqhawula umtshato wenziwa wanika, inkundla indawo kwaye inkundla ifayile inani. Ukuba akunazo ukuba ulwazi, kufuneka uqhagamshelane inkundla-ofisi okanye i-Central Registry ye wokuqhawula umtshato Iingxoxo